सात वर्षको बच्चा जस्को कमाई दुई अर्ब ४७ करोड छ, पत्याउनुहुन्छ ? (भिडियोसहित) - Nepali Online News Media-shikharnews.com
सात वर्षको बच्चा जस्को कमाई दुई अर्ब ४७ करोड छ, पत्याउनुहुन्छ ? (भिडियोसहित)
काठमाडौं, १८ मंसिर । सात वर्षको एउटा बच्चाले कति कमाउन सक्ला ? तपाईं भन्नुहोला कि यति सानो उमेरमा बच्चाले के नै काम गर्न सक्लान् ? तर रेयान नामका सात वर्षे बालक युट्युबमा खेलौनाको रिभ्यु गर्छन् र यसको बदलामा उनका आमा–बुवाले राम्रो पैसा कमाइरहेका छन् ।
रेयानले गत वर्ष ११ मिलियन डलरको कमाई गरेका थिए जुन अहिले बढेर २२ मिलियन डलर (दुई अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ) भएको छ । युट्युबमा रेयानको भिडियो करोडौंले हेर्छन् । रेयान ट्वेजरिभ्यु नामबाट एउटा युट्युब च्यानल चलाउँछन् ।
सेलिब्रिटीको सूचीमा छ नामः यो युट्युब च्यानलमार्फत रेयान आफ्ना दर्शकलाई खेलौनाको दुनियाँमा लैजान्छन् । फोर्ब्स म्यागजिनले उनलाई सन् २०१७ मा संसारको सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक पाउने सेलिब्रिटीको सूचीमा राखेको थियो ।
सन् २०१६ मा सुरु भएको रेयान ट्वेजरिभ्युको भिडियोलाई अहिलेसम्म १६ अर्ब बढीले हेरिसकेका छन् । तर यति चर्चित हुँदा पनि रेयानबारे संसारलाई त्यति धेरै जानकारी छैन । उनी अमेरिकी हुन् भन्ने मात्र जानकारी उपलब्ध छ ।
युट्युब च्यानलः गत वर्ष वासिङ्टन पोस्टलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा रेयानकी आमाले भनेकी थिइन्, ‘छोरा तीन वर्षको हुँदा युट्युब च्यानल बनाउने सोच आयो । रेयान निकै सानो हुँदादेखि नै खेलौनाको रिभ्यु देखाउने च्यानल निकै हेर्दथे ।’